Những lỗi thường gặp ở máy lạnh. Nguyên nhân và cách khắc phục | Grado.vn - Grado.vn
Đang Đọc: Những lỗi thường gặp ở máy lạnh. Nguyên nhân và cách khắc phục | Grado.vn in grado.vn
1 एयर कन्डिसनरमा अचानक मेसिन चिसो नभएको, सुरु हुन नसक्ने, गन्ध आउने, आवाज आउने आदि जस्ता असामान्य लक्षणहरू देखा पर्दा मेसिनलाई मर्मतका लागि ल्याउन हतार नगर्नुहोस् किनभने केही समस्याहरू ह्यान्डल र समाधान गर्न सकिन्छ। घरमै ठीक छ।
1.1 पहिलोमेसिनमा ग्यासको अभाव छ, ग्यास सकिएको छ
1.2 २कम्प्रेसर चलिरहेको शोर
1.3 ३एयर कन्डिसनर धेरै चिसो छ
1.4 ४मेसिन निरन्तर चल्छ तर चिसो छैन
1.5 ५मेसिन निरन्तर चल्छ र रोकिन्छ
1.6 ६दबाव सम्बन्धित त्रुटिहरू
1.7 ७ओभरलोडको कारणले लगातार रन र रोकिन्छ
1.8 ८बाहिरी एकाइ फ्यान चलिरहेको छैन
1.9 ९इन्डोर एकाइ फ्यान चलिरहेको छैन
1.10 दसशरीरबाट हावा बाहिर निस्किरहेको अवस्थामा एयर कन्डिसनर चिसो हुँदैन
एयर कन्डिसनरमा अचानक मेसिन चिसो नभएको, सुरु हुन नसक्ने, गन्ध आउने, आवाज आउने आदि जस्ता असामान्य लक्षणहरू देखा पर्दा मेसिनलाई मर्मतका लागि ल्याउन हतार नगर्नुहोस् किनभने केही समस्याहरू ह्यान्डल र समाधान गर्न सकिन्छ। घरमै ठीक छ।
पहिलोमेसिनमा ग्यासको अभाव छ, ग्यास सकिएको छ
एयर कन्डिसनर भित्रको ग्यास एक रसायन हो जुन सड्दैन, त्यसैले यो सामान्यतया मेसिनको सञ्चालनको क्रममा हराउने छैन। यदि मेसिनमा ग्यासको कमी छ भने, ग्यास समाप्त हुने कारणले मात्र हुन्छ चुहावट घटना पाइपलाइनहरू, चुहावट भल्भहरू, … वा नयाँ स्थापना गर्दा, प्राविधिक कर्मचारीहरूले आवश्यक ग्यास जाँच गर्दैनन् र भर्दैनन्।
वातानुकूलित ग्यासको कमी छ भने जान्नको लागि, तपाईंले केही घटनाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ पछि:
मेसिन चिसो छैन, कम चिसो छ।
बाहिरी इकाईको सानो पाइप भल्भ हिउँले ढाकिएको छ।
अपरेटिङ वर्तमान मेसिनमा संकेत गरिएको मूल्याङ्कन वर्तमान भन्दा कम छ।
कम्प्रेसरमा सक्शन ग्याँसको दबाब सामान्य दबाव (सामान्य मान 65 – 75 psi बाट)। उच्च पक्षमा दबाब पनि सामान्य भन्दा कम छ।
केही एयर कंडीशनरहरूमा, नियन्त्रण बोर्ड हुनेछ5– 10 मिनेट पछि स्वचालित रूपमा बन्द इनडोर एकाइमा सञ्चालन र त्रुटि रिपोर्टिङ।
कसरी ठीक गर्ने:
कन्ड्युट जाँच गर्न र ग्यास पूर्ण रूपमा रिचार्ज गर्न सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
देखि फेब्रुअरी 25, 2020 देखि डिसेम्बर 31, 2020 सम्मGREEN Dien May ले कार्यक्रम लागू गर्दछ नि: शुल्क वातानुकूलित सफाई प्रणालीमा कारोबार भइरहेको सबै वातानुकूलित उत्पादनहरूको लागि। इनडोर युनिट – बाहिरी एकाइ सफा गर्नुको साथै प्राविधिक कर्मचारीहरूले ग्यास जाँच गर्नेछन्। यदि मेसिनमा पर्याप्त ग्यास छैन भने, कृपया ग्राहकहरूलाई सल्लाह दिनुहोस् र ग्यास चार्ज गर्ने मूल्यहरू उद्धरण गर्नुहोस्। विवरण यहाँ।
२कम्प्रेसर चलिरहेको शोर
कम्प्रेसर चलिरहेको आवाज को घटना अक्सर मा देखा पर्नेछ बाहिरी इकाई बाहिर स्थित छ। तपाईं सजिलैसँग एयर कन्डिसनर खोलेर चिन्नुहुनेछ, कोठामा पनि, तपाईं अझै बाहिरबाट आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ।
यस घटनाको कारण हुन सक्छ किनभने बोल्ट वा स्क्रूहरू ढीला छन्, वा कम्प्रेसर भित्र क्षतिग्रस्त घटकहरू छन्, जसले गर्दा मेसिन स्थिर रूपमा काम गर्न सक्दैन। थप रूपमा, पाइपहरू सँगै वा केसको बीचमा अत्यधिक ग्यास वा बलियो घर्षणले पनि सञ्चालनको क्रममा आवाज निम्त्याउन सक्छ।
Xem Thêm Top 8 quạt điều hòa Panasonic tốt chất lượng, bán chạy nhất | Grado.vn
एक अर्कासँग टक्करबाट जोगाउन पाइपहरू ठीक गर्नुहोस्।
बाहिरी एकाइ राखिएको ठाउँ समतल छ वा छैन, कम्प्रेसर हाउसिंग डेन्टेड छ कि छैन, आन्तरिक विवरणहरूसँग टक्करको कारण जाँच गर्नुहोस्। एकै समयमा, मेसिनको तल्लो भागमा बोल्टहरू ढिलो छ वा छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् स्थिरताको लागि उपकरण रिसेट गर्नुहोस् र ढीलो बोल्टहरू कस्नुहोस्।
हेक्सागोनल भल्भ प्रयोग गरेर बाहिरबाट अतिरिक्त ग्यास निकाल्नुहोस्। डिस्चार्ज स्थिति बाहिरी एकाइको अन्त्यमा शंकुको छेउमा ठीक छ।
कम्प्रेसरलाई नयाँसँग बदल्नुहोस्। प्रतिस्थापन गर्नु अघि, तपाईंले सही खरिद छनौट गर्न कोड, ब्रान्ड र क्षमता जाँच गर्न आवश्यक छ।
३एयर कन्डिसनर धेरै चिसो छ
एयर कन्डिसनर धेरै चिसो हुनुको कारण मेसिनको तापक्रम नियन्त्रक बिग्रिएको वा प्रयोगको आवश्यकताको तुलनामा तापक्रम धेरै कम भएको हुन सक्छ।
तापक्रम नियन्त्रक र तारहरूको निरन्तरता जाँच गर्नुहोस्।
तदनुसार तापमान समायोजन गर्नुहोस्।
४मेसिन निरन्तर चल्छ तर चिसो छैन
कहिलेकाहीँ तपाईले एयर कन्डिशनर अझै पनि निरन्तर चलिरहेको छ तर कुनै कूलिंग प्रभाव छैन। यस अवस्थाको लागि धेरै सम्भावित कारणहरू छन्, जस्तै:
चुहावट वा अवरुद्ध ग्यास पाइपलाइनको कारण ग्यासको अभाव।
एयर फिल्टर र इनडोर युनिट फोहोर छन्, चिसो हावा जारी हुनबाट रोक्छ।
कन्डेनसर फोहोर छ।
पर्याप्त हावा इनडोर एकाइ मार्फत जान्छ।
चिसो हावा पुन: संचार गर्दैन।
कम्प्रेसरले राम्ररी काम गरिरहेको छैन।
धेरै भारी भारले मेसिन चलाउनको लागि पर्याप्त शक्ति बनाउँदैन।
ग्याँस प्रणाली जाँच गर्नुहोस्। ग्यास फिर्ता, भ्याकुम र आवश्यक भएमा ग्यास रिचार्ज गर्नुहोस्।
एयर फिल्टर प्रणाली र भित्री एकाइ सफा गर्नुहोस्।
बाहिरी इकाई र शीतलन प्रणाली कायम राख्नुहोस्।
रेडिएटर एयरफ्लोमा कुनै पनि अवरोधहरू जाँच गर्नुहोस् र हटाउनुहोस्।
लोड र वर्तमान भोल्टेज जाँच गर्नुहोस्। यदि लोड पर्याप्त छैन भने, तपाईंले प्रयोग नगरिएका विद्युतीय उपकरणहरू बन्द गर्नुपर्छ, वा स्थिर करन्ट सुनिश्चित गर्न भोल्टेज स्टेबिलाइजरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
५मेसिन निरन्तर चल्छ र रोकिन्छ
कतिपय अवस्थामा, एयर कन्डिसनर केही समयको लागि चल्छ र फेरि बन्द हुन्छ, त्यसपछि यो प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ जसले बिजुली खपत मात्र होइन उत्पादन प्रयोगको अनुभवलाई पनि असर गर्छ।
यस घटना को केहि कारणहरु:
ग्यासको कमी वा अधिकले मेसिनलाई अस्थिर बनाउँछ।
ग्यास पाइपलाइन अवरुद्ध हुँदा अवरुद्ध भएको हो ।
कम्प्रेसर कन्ट्याक्टर कुण्डल बिग्रिएको छ।
कन्डेनसर फोहोर र भरिएको छ।
थ्रोटल भल्भ वा केशिका बन्द। वा थ्रोटल भल्भको सेन्सर बल्ब चुहिरहेको छ।
कम भोल्टेज मेसिन काम गर्न को लागी पर्याप्त छैन।
ग्यास रिचार्ज गर्नुहोस् यदि अभाव भएमा वा बढी भएमा ग्यास घटाउनुहोस्।
पाइपलाइनमा अवरोध गर्ने विवरणहरू हटाउनुहोस्।
आवधिक रूपमा एयर कन्डिसनर सफा गर्नुहोस्। एकै समयमा, बाहिरी एकाई – इनडोर एकाई र महत्त्वपूर्ण जडान विवरणहरू कायम राख्नुहोस्।
थ्रोटल परिवर्तन गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा केशिका ट्यूबहरू।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एयर कन्डिसनरको अपरेटिङ भोल्टेज मेसिनमा संकेत गरिएको मूल्याङ्कन अनुसार छ। आवश्यक भएमा भोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयोग गर्नुहोस्।
६दबाव सम्बन्धित त्रुटिहरू
कारण कसरी ठीक गर्ने
कम सक्शन दबाव
ग्यासको अभाव ।
तरल ग्यास लाइन अवरुद्ध वा अवरुद्ध छ।
एयर फिल्टर फोहोर छ र इनडोर युनिट फोहोर छ।
थ्रोटल भल्भ वा केशिका बन्द।
थ्रोटल सेन्सर बल्ब चुहावट भइरहेको छ।
स्मट प्रयास गर्नुहोस्।
प्रशंसक जाँच गर्नुहोस्।
भल्भ वा केशिका बदल्नुहोस्।
उच्च सक्शन दबाव
सेन्सर माउन्टिङ स्थिति सही छैन।
लोड धेरै भारी छ।
चार्ज गरिएको ग्यासको रकम फिर्ता लिनुहोस्।
कम्प्रेसर प्रदर्शन जाँच गर्नुहोस्।
सेन्सरको स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्।
कम कम्प्रेसन दबाव
उच्च कम्प्रेसन दबाव
कन्डेनसर फोहोर वा आंशिक रूपमा अवरुद्ध छ।
एयर कन्डिसनरमा हावा वा गैर-कन्डेन्सेबल ग्यास छ।
हावा वा शीतलकको तापक्रम उच्च हुन्छ।
हावा वा चिसो पानीको अभाव।
बाहिरी इकाईको मर्मत सम्भार।
भ्याकुम ग्यास हटाउनुहोस् र नयाँ ग्यास चार्ज गर्नुहोस्।
चिसो हावा प्रवाहमा अवरोधहरू हटाउनुहोस्।
विशेष गरी, 2020 माGREEN Dien प्रतिबद्ध हुन सक्छ 100% नि: शुल्क वैक्यूम अनलाइन अर्डर गर्ने वा राष्ट्रव्यापी सुपरमार्केटहरूमा एयर कन्डिसनरहरू खरिद गर्ने ग्राहकहरूको लागि एयर कन्डिसनरहरू स्थापना गर्दा। विवरणहरूको लागि यहाँ हेर्नुहोस्।
७ओभरलोडको कारणले लगातार रन र रोकिन्छ
एयर कन्डिसनर नचल्दा रोक लगाउनाले पनि एयर कन्डिसनर चिसो नहुन सक्छ। यो निम्न कारणहरूको कारण हुन सक्छ:
कम्प्रेसरसँग कुनै पावर सप्लाई छैन: नियन्त्रण बोर्डको कारणले, सर्किट खुला छ वा सम्पर्ककर्ता क्षतिग्रस्त छ र बन्द गर्न सकिँदैन।
क्यापेसिटरमा क्षतिको कारण, बाहिरी एकाइ फ्यान द्वारा क्षतिग्रस्त छ, र कम्प्रेसर मोटरले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन।
भित्र भित्र मोटर windings जलाउनुहोस्।
ग्यासको कमी वा बढी हुनु।
कम वा अस्थिर भोल्टेज।
मोटरको तारमा आगो लागेमा, फ्यान वा कम्पोनेन्टमा क्षति पुगेमा, तपाईंले अगाडि बढ्नु पर्छ नवीकरण।
ग्यासको अभाव भएमा पूरै चार्ज गर्नुहोस् वा बढी भएमा ग्यास निकाल्नुहोस्।
भोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयोग गर्नुहोस् स्थिर भोल्टेज र वर्तमान सुनिश्चित गर्न।
८बाहिरी एकाइ फ्यान चलिरहेको छैन
एयर कन्डिसनरको बाहिरी एकाइ फ्यानले बाहिरी एकाइको तातो आदानप्रदान प्रक्रियालाई राम्रोसँग गर्न मद्दत गर्न बाहिरको हावा कोरेर बाहिरी इकाईमा उडाएर बाहिरी इकाईको लागि तातो फैलाउने प्रभाव हुन्छ। बाहिरी एकाइको तातो खपत जति छिटो हुन्छ, एयर कन्डिसनरको शीतलन प्रभाव त्यति नै राम्रो हुन्छ।
निम्न मध्ये केही कारणहरूले बाहिरी एकाइ फ्यानले काम नगर्ने कारणले गर्दा एयर कन्डिसनरको चिसो क्षमतालाई असर गर्छ:
मांसपेशी भाग को कारण: प्रयोगको लामो अवधिमा, बाहिरी इकाई फ्यानले बियरिङहरू लगाउन सक्छ, हड्डीहरू मार्न सक्छ, ग्रीस सुकाउन सक्छ,… तपाईंले प्रोपेलरलाई हातले क्र्याङ्क गरेर सजिलै पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कताई गर्दा भारी महसुस हुन्छ, र तपाईंले छोड्दा फ्यान बन्द हुन्छ भने, मेकानिकल भागमा भएको क्षतिले बाहिरी इकाईको सञ्चालनलाई असर गरेको छ।
Xem Thêm Điều hòa Panasonic2chiều Inverter 12000BTU CS-YZ12WKH-8 | Grado.vn
बिजुली भाग को कारण: बिजुलीको तार भाँच्नु, मोटरमा आगो लाग्नु, क्यापेसिटरमा आगो लाग्नु, पावरको कर्ड फुट्नुले विद्युतीय क्षति हुन्छ। जान्नको लागि सर्किटमा प्रवाहको प्रवाह जाँच गर्न एमिटर प्रयोग गर्नु हो।
एयर कंडीशनर को केहि मोडेल मा, प्रशंसक को बिजुली आपूर्ति इनडोर एकाइ सर्किट बोर्ड बाट नियन्त्रित छ। त्यसकारण, जब सर्किट बोर्ड असफल हुन्छ, फ्यानले काम गर्न छोड्छ।
यदि ब्लक बिग्रिएको छ भने, ग्यासले चिसो हुन रोक्छ, जसले प्रणालीमा विफलता निम्त्याउँछ, त्यसैले सम्पूर्ण बाहिरी इकाईले काम गर्न छोड्छ।
बिजुली मिटरको साथ क्यापेसिटरहरू, सर्किटहरू, … स्व-जाँच गर्नुहोस्। वा तपाईले वारेन्टी स्टाफलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सामान्य रूपमा जाँच गर्न र यदि कुनै क्षतिग्रस्त कम्पोनेन्टहरू बदल्नुहोस्।
९इन्डोर एकाइ फ्यान चलिरहेको छैन
इनडोर एकाइ फ्यानले इकाई भित्रका विवरणहरूलाई चिसो पार्ने प्रभाव पार्छ, र एकै समयमा फोहोरलाई युनिटमा टाँसिनबाट रोक्छ, हावालाई स्थिर रूपमा घुमाउन मद्दत गर्दछ। यदि इनडोर एकाइ फ्यान चलिरहेको छैन भने, लुभरबाट चिसो हावा बाहिर निस्कने छैन, एयर कन्डिसनर चिसो हुन सक्दैन।
इनडोर एकाइ फ्यान नचल्नुको कारण निम्न कारण हुन सक्छ:
फ्यानको मोटर सर्ट-सर्किट हुन्छ वा खोललाई छुन्छ, वातानुकूलित फ्यान बाहिर निस्कन्छ, मांसपेशी बन्डल निम्त्याउँछ।
फ्यानको पावर कर्ड भाँचिएको छ वा पावर कर्ड ढिलो जोडिएको छ। मोटरको तार जल्नु, मोटरको १ तार भाँच्नु आदि पनि इन्डोर युनिटको फ्यानले काम नगर्नुको कारण हो ।
फ्यान कन्ट्याक्टर कुण्डल बिग्रिएको छ।
सर्ट सर्किट क्यापेसिटर।
लामो समयको प्रयोगको कारणले इनडोर एकाइ फ्यानले काम गर्दैन, तपाईंले अगाडि बढ्नको लागि सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ जाँच गर्नुहोस् र घटकहरू प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
दसशरीरबाट हावा बाहिर निस्किरहेको अवस्थामा एयर कन्डिसनर चिसो हुँदैन
शरीरबाट हावा बाहिर निस्किँदा पनि एयर कन्डिसनरले हावालाई चिसो वा तातो गर्दैन जस्तो लाग्छ भने निम्न कारणले हुनसक्छ:
सेट तापमान कूलिंग माग भन्दा बढी छ।
कोठा सिल गरिएको छैन, जसले गर्दा बाहिरबाट चिसो हावा गुम्छ।
एयर फिल्टर र इनडोर युनिट धुलो छ।
मेसिनको क्षमताको लागि कोठा धेरै ठूलो छ।
तापमान सेटिङ जाँच गर्नुहोस् रेफ्रिजरेसनको आवश्यकताको लागि यो उचित छ कि छैन? कृपया वातानुकूलित शीतलन प्रभाव प्राप्त गर्नको लागि तापमान र शीतलन मोड रिसेट गर्नुहोस्।
एयर फिल्टर प्लेट जाँच गर्नुहोस् सञ्चालन भेन्टिलेटेड होस् वा होइन, एयर फिल्टर सफा गर्नाले एयर कन्डिसनरलाई राम्रोसँग काम गर्न र थप स्थिर रूपमा चिसो हुन मद्दत गर्दछ।
जाँच गर्नुहोस् र मुख्य ढोका बन्द गर्नुहोस्तपाईको घर वा कार्यालयको झ्याल खुला छ भने।
भित्री र बाहिरी एकाइहरूमा एयर इनलेट र आउटलेट हावा नलिकाहरू सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि पर्खनुहोस् लगभग3मिनेट र स्थिर हावा परिसंचरण र राम्रो ग्यास विनिमयको लागि वातानुकूलित पुन: सुरु गर्नुहोस्।
एयर कंडीशनर पनि सञ्चालनको समयमा चिसो नहुन सक्छ कम्प्रेसर सुरक्षा मोड3मिनेटको लागि ग्यास, त्यसैले कृपया यो मोड पूरा नभएसम्म पर्खनुहोस्।
तपाईले जुन कोठामा बिजुलीको ग्रिल वा तातो पानीको कचौरा जस्ता उच्च ताप भएका वस्तुहरू प्रयोग गरिरहनुभएको छ, बाहिर निस्कने तापले कोठाको चिसोपनलाई पनि असर गर्छ कि छैन भनी जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको एयर कन्डिसनर माथि उल्लिखित समस्याहरू मध्ये एकमा परिरहेको छ भने, छिटो जाँच गर्नुहोस् र एयर कन्डिसनरलाई अझ स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्न माथिका उपायहरू लागू गर्नुहोस्। आफ्नो अनुभवहरू साझा गर्न नबिर्सनुहोस् साथै वातानुकूलित समस्याहरूको बारेमा प्रश्नहरू जुन तपाईंले Dien May Xanh सँग तल अनुभव गर्नुभएको छ! भाग्यले साथ दिओस्!